Ny asa tanana | Chambre d'hôtes à Antananarivo - Soamahatony
Submitted by admin on Fri, 12/03/2010 - 15:58
Lamba landy manify voahoso-doko no mandravaka ny rindrin’ny fidirana sy ny efitra fandriana ao amin’ny trano lehibe : sary mampiseho ny fiainana andavanandro, ny asa madinika mbamin’ny zava-maniry malagasy… Ao koa ny fonon’ondana sy "abat-jour", ny saron-doha sy karavato mahazatra. Izany no mampiavaka ireo asa tanan’i Sahondra, ary raha maharitraritra eto Madagasikara ianao dia azony atao ny sary hoso-doko tianao.
Mahaliana anao ve ny fanaka Zafimaniry ? Sakaizan’i Daniel sy Sahondra hatry ny ela i Jules Courtois izay mpandrafitra fanaka samihafa voasikotra araka ny fomba amam-panao any amin’iny faritra miavaka ao anaty faritany Betsileo iny. Hita ao Soamahatony ny santionan’ny asa tanany : seza, vata lehibe na vatan-tantely, fanambanin-tavoahangy mbamina haingon-drindrina isan-karazany.
Ao ihany koa ireo taozavatra vitan’ny mponina manodidina : mosara, lamban-databatra vita petakofehy…, ary ny lamba vita crochet adrakofana ny farafara rehetra dia sangan’asan’ny vadin’ireo olona miasa ao Soamahatony avokoa. Mifandray amin’ny Akany Avoko ery Ambohidratrimo izay mitaiza sy manampy zazavavy sendra fahasahiranana koa i Sahondra. Ho hitanao any ary azonao vidina ny vokatra asan’ireo tanora ireo : zaitra akanjo na petakofehy, sary, mofomamy…
Hahafaly an’i Daniel sy Sahondra ihany koa ny hampahafantatra anao ny Groupement Interprofessionnel Eco Tanana (GIET) : mpandrafitra hazo, mpanao hoditra, mpamokatra landy be sy mpiompy landy, mpanao taozavatra amin’ny taretra, mpanjaitra, mpandrary satroka… Hita ao amin’ny trano fampirantiana eo Andohalo, toerana manan-tanantara eny amin’ny faritra avon’Antananarivo, ny santionan’ny vokatr’ireny asa samihafa ireny.
Misy ihany koa ny fitsidihana miaraka amin’ny mpampizaha tany (guides) eo amin’ireo toera-manodidina manan-tantara, izay ifarimbonan’i Daniel amin’ny GIET : tsy lavitra an’i Soamahatony ny vohitra ahitana ny "marqueterie African Colors" ; eo Ambatolampy koa, tanàna kely ery am-pitan’ny tanimbary manoloana ny trano, dia misy mpamokatra ny taratasy Antemoro izay manaraka ny fomba fanaon’ny any Ambalavao any amin’ny faritra atsimon’ny Nosy. Manodina taratasy efa niasa ko izy ireo mba hiarovana ny ala.